Le journal du 06 avril 2022 - Studio Sifaka - Actu, musique, conseils et débats pour les jeunes à Madagascar
Parc botanique Ambohijatovo, non seulement catégorisé comme site et attraction des touristes dans la capitale mais il participe à la purification de l’air et reverdit Antananarivo.
Zaridaina sy toerana maitso : mbola tsy ampy ho an’ny mponin’andrenivohitra.
6 Aprily andro iraisam-pirenena ho an’ny Ping Pong : Fanatanjahantena afaka atao manomboka amin’ny faha 5 taonan’ny zaza.
Fialambolin’ny paska Antsirabe: hanomezana tombony ny tanora.
Ukraine – Russie : mitazona ny tsy fiandaniana fa miantso amin’ny fiarovana ny sivily sy ny fanohizana ny fifampiresahana ho vahaolana maharitra.
Studio Sifaka · 2022 - 04 - 06 NY VAOVAO